सर्ने रोग् Archives - HealthyKhabar
तीन महिनामा १४ हजार ६ सय ६२ जनालाई डेंगु
काठमाडौं,कार्तिक २२ । साउनयता मुलुकभर १४ हजार ६६२ जना डेंगुबाट संक्रमित भएका छन्। साउन १ गतेदेखि कार्तिक १८ गतेसम्मको तथ्यांक बुधबार सार्वजनिक गर्दै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले मुलुकभर साढे तीन महिनाको अवधिमा सो संख्यामा मानिस डेंगुबाट संक्रमित भएको जनाएको हो। महाशाखाका अनुसार यो साढे तीन महिनाको अवधिमा प्रदेश १ मा एक हजार २४६ जनामा डेंगु देखिएको छ। प्रदेश २ मा २६८, प्रदेश ३ मा सात हजार १५१ र गण्डकी प्रदेशमा तीन हजार ८०७जनामा डेंगु देखिएकाे छ। त्यस्तै प्रदेश ५ मा एक हजार ९७७, कर्णाली प्रदेशमा ७३ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४० जनामा डेंगुको संक्रमण महाशाखले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार यो वर्ष डेंगुका कारण ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। काठमाडौंमा दुई जना, सिन्धुपालचोक, सुनसरी, चितवन र डोटीमा १–१ जना गरी ६ जनाले डेंगुको संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका हुन्।
काठमाडौँ । डेङ्गु प्रकोपबाट अहिले देश आक्रान्त भइरहेको समयमा अहिले डेङ्गु जस्तै लक्षण मिल्दो जुल्दो भएको स्क्रब टाइफसको पनि संक्रमण बढ्न थालेको छ । कैलालीमा स्क्रब टाइफसको संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । ज्वरो आएर उपचारका लागी कैलालीको धनगढी स्थीत मायामेट्रो अस्पतालमा भर्ना भएका २० वर्षीय भरत खातीको गएको बिहीवार मृत्यु भएको हो । यसअघि चितवनमा एक जनाको स्क्रब टाइफसका कारण मृत्यु भएको थियो । नेपालमा अहिले स्क्रब टाइफस ६३ जिल्लामा फैलिसकेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत घनश्याम पोखरेलले अहिलेसम्म ६३ जिल्लामा स्क्रब टाइफसको समस्या देखिएको बताए । सन् २०१९ मा ५ सय ५४ जना बिरामी भएका छन् । निधनको सङ्ख्या हेर्ने हो भने महाशाखाको अनुसार सन् २०१९ मा मात्र नेपालमा स्क्रब टाइफसबाट ३ जनाको निधन भइसकेको छ । स्क्रब टाइफसको समस्या अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नं. ५ मा धेरै देखिएको महाशाखाले जनाएको छ । यो रोगको बिरामीको सङ्ख्या सबै भन्दा धेरै धादिङमा १३०…
डेङ्गुबाट अब स्क्रबटाइफसको प्रकोप बढ्यो
काठमाडौँ,असोज २ ।  पछिल्लो समयमा डेङ्गु का साथै स्क्रबटाइफसले पनि मानिस बिरामी पर्न थालेका छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुनले स्क्रबटाइफसका कारण ज्वरो आएका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले औसतमा दैनिक आठ नौ जना स्क्रबटाइफसका बिरामी भेटिने गरेका छन् । डा. पुनले भन्नुभयो, ‘डेङ्गुको आशङ्कामा उपचार गर्न आएकाहरूको जाँच गर्दा स्क्रबटाइफसको सङ्क्रमण देखिएको  ।’ उहाँका अनुसार डेङ्गुका नयाँ बिरामीको फाटफुटबाहेक नियन्त्रण नै भइसकेको छ । डेङ्गुका पुराना बिरामी फलोअपमा आउने क्रम भने बढिरहेको उहाँको भनाइ छ । डा. पुनले स्क्रबटाइफसको छुट्टै परीक्षण टेकु अस्पतालबाहेक अन्य अस्पतालमा खासै नगर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्ला दिनमा यसको सङ्क्रमण बढेकाले सबै अस्पतालले पनि डेङ्गुसँगै स्क्रबटाइफसको पनि परीक्षणमा लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । स्क्रबटाइफसको सङ्क्रमण पशुमा लाग्ने किर्ना र मुसाबाट मानिसमा हुने सङ्क्रमण हो । सबाट बढी गाउँबस्ती प्रभावित हुने गर्थे तर अहिले काठमाडौँबासीलाई समेत देखिन थालेको भन्दै उहाँले आश्चार्य व्यक्त गर्नुभयो । चिकित्सकका अनुसार ज्वरो आउने, बढी पसिना आउने, टाउको दुख्ने समस्या…
डेंगुका बिरामी उपचार गर्न नर्भिक अस्पतालको छुट्टै कक्ष
काठमाडौं, २७ भदौ । थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालले डेंगुका बिरामीको चाप बढेपछि छुट्टै वार्डको व्यवस्था गरेको छ । डेंगुका बिरामीलाई विशेष व्यवस्थापन एवं उपचारका लागि छुट्टै वार्डको व्यवस्था गरेको अस्पतालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । हाल नर्भिक अस्पतालमा १ दर्जन भन्दा बढी डेंगु ज्वरोका बिरामीहरु उपचाररत रहेका छन् । बिरामीको चाप बढ्दो क्रममा रहेका कारण छुट्टै क्लिनिक र छुट्टै वार्डको व्यवस्था गरिएको हो । सो वार्डमा हाललाई सुविधा सम्पन्न ६ वटा शैयाको व्यवस्था गरिएको छ । वार्डमा डेंगु हेल्प डेस्क र बिरामीहरुको शीघ्र तथा उपयुक्त रेखदेख, व्यवस्थापन एवं उपचारका लागि छुटै हेल्पलाइनको समेत व्यवस्था गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । सहुलियत दर उपलब्धहुने उक्त क्लिनिक÷वार्डमा चिकित्सकहरु तथा नसिङ्ग स्टाफहरु २४ सै घण्टा सेवारत रहने छन् भने विशेष सहुलियत दरमा डेङ्गू परिक्षण किट समेत उपलब्ध हुनेछ । डेंगु ज्वरो भएको यदि कसैलाई शङ्का लागेमा ९८०१२४७७५० मा तुरुन्त सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
काठमाडौँ, २६ भदौ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले हालै मुलुकभर प्रकोपका रुपमा देखिएको डेङ्गुका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदैँ यस विषयमा यथासक्य छिटो सदनलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन् । प्रतिनिधसभामा केही दिन अगाडिदेखि तथा आजको शून्य समयमासमेत सांसदहरुले डेङ्गु प्रकोपको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख महराले सरकारको नाममा विशेष रुलिङ गरेका हुन् । सभामुख महराले भने, “केही दिनयता भएका संसद्को बैठकमा नियमितजसो डेङ्गुबारे माननीयहरुले कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ, उक्त रोगको प्रकोपको अवस्था र नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयासबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछु ।” आजको बैठकको शून्य समयमा सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले मुलुकमा डेङ्गु रोगको महामारी फैलिएको भन्दै सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गरेका थिए । उनीहरुले महामारीको रुपमा फैलिएको भनिएको डेङ्गुको प्रकोपको अवस्था र रोग नियन्त्रणका लागि भएको प्रयासबारे यथाशीघ्र सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शून्य पक्षमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले डेङ्गुबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी नदिएको भन्दै तत्काल यो विषय सदनलाई जानकारी…
निजी अस्पतालमा समेत बिरामीको चाप बढ्दो, ‘डेङ्गु खोज र नष्ट गर’ अभियान सुरु
काठमाडौँ,२६ भदौ । सरकारीमा अस्पतालमा मात्र होइन, निजी अस्पतालमा पनि डेङ्गु रोगका बिरामीको चाप बढेको छ । सरकारी अस्पतालहरू शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जलगायतका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो छ । रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सरकार तथा स्थानीय तहले समेत रोकथामका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारले डेङ्गु नियन्त्रण गर्न ‘डेङ्गु खोज र नष्ट गर’ अभियान सुरु गरिएको छ । सरुवा रोग अस्पतालमा भीड टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै बिरामी पुग्ने गरेका छन् । दैनिक ५०० जनाको डेङ्गु परीक्षण हुने गरेकोमा २५० देखि तीन सयसम्मलाई डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । विगत १० दिनदेखि सरुवा रोग अस्पतालमा डेङ्गु पोजेटिभ बिरामीको सङ्ख्या एक हजार ५०० पुगिसकेको छ । डा. शेरबहादुर पुनलगायतको पाँच जनाको टोलीबाट अस्पताल जानेबित्तिकै डेङ्गुका लागि छुट्टै एकाइ स्थापना गरेर बिरामीको उपचार भइरहेको छ । डेङ्गुको आशङ्का गरिएका बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ । डा. पुनलगायतका चिकित्सक टोलीले दैनिक…
भक्तपुर, २५ भदौ । देशभरि फैलिएको डेङ्गु रोग भक्तपुरमा महामारीका रुपमा फैलिँदै गएको छ । एक साताको अवधिमा जिल्लामा ९९ जना बिरामीमा डेङ्गु रोग भएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका अधिकृत पार्थमणि न्यौपानेले भक्तपुर जिल्लामा आज बिहानसम्ममा ९९ जना बिरामीमा डेङ्गु रोग रहेको पुष्टि भएको जानकारी दिए । यो रोगको सङ्क्रमण बढ्दै गएको बताउँदै उनले अहिले प्रत्येक टोल, गल्ली र विद्यालयहरु डेङ्गु रोगको जोखिममा रहेको बताए । उनले टोल, नगर, विद्यालय लगायतका हरेक क्षेत्रमा यस रोगबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु भइरहेको जानकारी दिई सबै क्षेत्रमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पानी जम्न नदिने र फोहरहरु नराख्ने कार्य गर्नुपर्ने बताए । यता भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै ४० जना डेङ्गु रोगका बिरामी फेला परिसकेको भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिए। उनले भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ३७ र यहाँ आएका अन्य क्षेत्रका तीन जना गरी ४० जनामा डेङ्गु रोग भएको बताए । उनले भक्तपुर नगरपालिकाले डेङ्गु रोग नियन्त्रणसम्बन्धी वडा र विद्यालयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम, खाल्डाखुल्डी पुर्ने र…
नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई डेंगुको संक्रमण
काठमाडौं, २४ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई पनि डेंगुको संक्रमण देखिएको छ । सोमबार टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुगेर परीक्षण गर्दा गौतमलाई डेंगुको संक्रमण देखिएको हो । शनिबारबाट आएको ज्वरो नघटेपछि नेता गौतम चिकित्सकको सल्लाहमा अस्पताल पुग्नुभएको थियो।
टेकुस्थित सरुवा रोग अस्पतालमा मात्र एक हप्तामा १२ सय डेंगु संक्रमित बिरामी
काठमाडौँ, २२ भदौ । वैशाख महिनादेखि धरानबाट फैलिएको डेंगु पछिल्लो समय उपत्यकामा प्रकोपको रुपमा देखा परेको छ । अहिले उपत्यकामा फैलिएको डेङ्गुको प्रकोप महामारीको रुप लिने खतरा बढीरहेको छ । उपत्यकामा दैनिक ५, ६ सय व्यक्तिलाई डेंगु संक्रमण भइरहेको छ । टेकु स्थित सरुवा रोग अस्पतालमा मात्र दैनिक दुइसय जना डेगुका बिरामी संक्रमित भएको पुष्टि हुने गरेकाछन् । एकसाता अघिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा फैलिएको डेङ्गुको प्रकोपबाट टेकु अस्पतालमै १२ सय नयाँ संक्रमित भइसकेको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्र दैनिक १५० जना देखि तीनसय सम्मलाई डेङ्गु संक्रमित भएको पुष्टि भइरहेको छ । यो संख्या घट्ने भन्दा पनि बढ्ने क्रममा छ । अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले कतिपय व्यक्ति उपचारको लागि नीजि अस्पताल पनि गएकाले संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने बताउनुभयो । डेङ्गुको अवस्था भयावह हुदैछ, निर्देशक पाण्डेले भन्नुभयो,“डेङ्गु संक्रमित सबैलाई भर्ना गरेर सम्वभ छैन,–अत्यन्त जटिल किसिमका बिरामीलाई मात्र भर्ना गरेर राखिरहेका छौँ ।” निर्देशक पाण्डेले डेङ्गुका कारण प्लेटलेट्स घटेका,…